Programming ပိုင်း လိုက်ချင်လို့ ဘာရွေးရမလဲ - MYSTERY ZILLION
Programming ပိုင်း လိုက်ချင်လို့ ဘာရွေးရမလဲ
zarnilee April 2011 edited April 2011 in Programming ကျွန်တော် Programming စိတ်ဝင်စားလို့ အခုမှစမှာ ဘယ်လိုင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလဲ သိချင်လို့။ ကူညီပြီးရွေးပေးကြပါအုံး။:confused::confused::confused: မှတ်ချက်များ
CalmHill April 2011 edited April 2011 Administrators အဲဒါဆို ပြန်မေးရမယ် ဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲ planetgui April 2011 edited April 2011 Registered Users ကျွှန်တော်လညး်မေးချင်တယ်အကိုရာဘယ်လိုအပိုင်းကိုစိတ်၀င်စားရင်တော့ ဘာလိုင်းကိုလိုက် ....ဘယ်လို၀ါသနာပါရင်တော့ ဘာလေးကိုတက် .....ဘယ်လိုင်းကတော့ဖြင့် ဘာတွေလုပ်လို့၇တယ် .... ဆိုပြီးတော့ပေါ့အကို ....ကျွှန်တော့တို့လို အစလညး်မသိ အဆုံးလညး်မသိ တက်သစ်စလေးတွေ နားလည်အောင်လို့ပါလေးစားရိုကျိုးလျှက် CalmHill April 2011 edited April 2011 Administrators အင်း ဘာမှန်းမသိပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်တော့ မရှိဘူးလေ အဲဒါကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားတာလဲ ဘာတွေစိတ်ဝင်စားတာလဲတော့ ရှိရမှာပေါ့ အဲဒါကိုမူတည်ပြီးမှ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ အကြံပေးလို့အဆင်ပြေမှာပေါ့ လုပ်စရာတွေက အများကြီးရှိတာပဲ အဲဒါကြောင့်မေးတာပါ။တစ်ခုသေချာတာက ဒီအလုပ်လုပ်စားလို့ ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူး အချိန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်နဲ့လည်း ဘာသုံးစားလို့ရအောင် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး အဲဒါတော့သိစေချင်တယ် အချိန်တွေ အများကြီးရင်းရပါလိမ့်မယ်။ sayarjunjun April 2011 edited April 2011 Registered Users programmingကို ခုမှစမည့်သူများ:wink::wink::wink:c++,java,vb တို့ကို အရင်လေ့လာပါ...ပြီးရင်တော့Python နဲ့Dreamweaverကိုလေ့လာပါweb programming ကိုစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့့html,java scriptကိုအရင်လေ့လာပါ....ပြီးရင်ခု ခေတ်အသုံးများတဲ့ PHP,CSS,ASP,Ajax,စတာတွေကိုလေ့လာပါDatabase အပိုင်းကိုစိတ်၀င်စားတယ်ဆိုရင်တော့SQL,Oracle စတာတွေကိုအရင်လေ့လာပါသူတို့တွေက တကယ့်အခြေခံပါပဲ..ဒါတွေတတ်သွားရင်တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို လိုက်ဖို့လွယ်သွားပါပြီ....programming ကို အပိုင်းလိုက်လေ့လာမှအဆင်ပြေမှာပါ...ကိုယ်က ဘယ်အပိုင်းစိတ်၀င်စားလဲ...ကိုယ်တစ်ကယ်စိ်တ်၀င်စားတဲ့အပိုင်းကိုလိုက်ပါဟိုလူက ဘာကောင်းတယ်ပြောလို့တက်လိုက်....ဒီလူကဒါကောင်းတယ်ဆိုတတ်လိုက်နဲ့programmingက သင်ယူလို့ကိုပြီးဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.....ဘယ်ဟာမဆို တကယ်တတ်ကျွမ်းသွားရင် ကိုယ့်အတွက်နေရာတစ်နေရာမခဲယဉ်းပါဘူး...:redface::redface::redface: willy June 2011 Registered Users hey dude ! dun think abt Language first , think abt what do u want to do ?? saturngod June 2011 edited June 2011 Administrators I agree with @willy. Language is justatool. So, think about first, why you want to learn programming ? It's important for you.for route map , you can check following graphichttp://www.saturngod.net/wp-content/uploads/Programming.pnghttp://www.saturngod.net/wp-content/uploads/Web.png streamglory June 2011 Registered Users I also would like to know like that. Thanks you very much for graphic links. akh.infotech June 2011 Registered Users saturngod said:I agree with @willy. Language is justatool. So, think about first, why you want to learn programming ? It's important for you.for route map , you can check following graphichttp://www.saturngod.net/wp-content/uploads/Programming.pnghttp://www.saturngod.net/wp-content/uploads/Web.png
Great!I have shared these images on facebook , for some friends who want to know how to do to beaprogrammer . PhyoMyanmar August 2011 Registered Users :-D ကျွန်တော်လည်း ခုမှ စလေ့လာမှာဆိုတော့ .. ဟီးဟီး ဒါနဲကဗျာ .. C++ နဲ့ C# ဘယ်တွေကွာခြားသွားတာလဲခင်ဗျာ .. ဘယ်ဟာကိုလုပ်ရင် ပိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲမသိဝူး .. ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အစုံပေါ့ .. ဥပမာ Virus , Anivirus , Software , Application , စသဖြင့်ပေါ့ .. Web တော့စိတ်မ၀င်စားဝူး .. Window အပိုင်းစိတ်၀င်စားတယ် . အရေးကြီးတာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းလည်းရချင်တယ်ဗျာ .. ပြီးတော့ တစ်ခုခုကို အ၇မ်းထူးချွန်ချင်တယ်။ :-D ခုမှစမှာဆိုတော့ ဘာနဲ့စရမှန်းမသိလို့ပါ .။။ ပြီးတော့ ဥပမာ C# လုပ်တယ်ပဲထားဦး VB.net ကိုပါလုပ်ချင်ရင်တော့ ဆက်စပ်မူရှိလားမသိဘူး .. ဟဲဟဲ အကြံပေးပါဦးဗျို့ ဘယ်ဟာကစရမလဲလို့ ။ CalmHill August 2011 Administrators တကယ်တော့ Programming Language ဆိုတာက အထောက်အကူပြု Tools သက်သက်ပါပဲ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်အသုံးတည့်သလို သုံးနိုင်ဖို့အတွက်က ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Knowledge ကအရေးကြီးပါတယ် အဲဒါကြောင့် System Programming လုပ်ချင်ရင်တော့ ပထမဆုံးက ကွန်ပျူတာတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ပရိုဂရမ်တွေကို ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားသလဲ သိရပါမယ်။ ကွန်ပျူတာဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုလို့ သိပါတယ်ဆိုပြီး ရယ်ချင်ရယ်မယ် ပရိုဂရမ်တစ်ခု အစကနေအဆုံးအထိ ကွန်ပျူတာဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပေးသွားသလဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသေအချာပြန်စဉ်းစားပါ အသေအချာမသိရင် ခင်ဗျားရဲ့ Knowledge ဟာမလုံလောက်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ Operating System တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ သိရပါမယ် ဒါလည်းအချိန်ပေးရပါတယ်။ အဲဒါတွေလေ့လာနေတာနဲ့ တပြိုင်တည်းမှာ Programming Language တစ်ခုခုကို တပြိုင်တည်းလေ့လာပေါ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ C++ ပါပဲ ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုသုံးစားလို့ရအောင် တတ်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ ကြိုက်တဲ့သင်တန်းသွားတက် C++ ကိုသုံးစားလို့ရအောင် သင်ပေးနိုင်မယ့်နေရာ တစ်နေရာမှမမြင်ဘူး။ အဲလိုတွေဖြစ်နေလို့ C++ ဆိုတာ သုံးလို့မရဘူးလို့ သုံးစားလို့မရတဲ့လူတွေ ပြောလေ့ပြောထရှိတယ်။ Business Application တွေရေးဖို့ဆိုရင်တော့ C++ ကအသုံးမတည့်ပြန်ဘူး အဲဒါတွေကျတော့ Java, C# လိုဟာတွေက ပိုအသုံးတည့်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ဘာသုံးချင်သလဲ အရင်စဉ်းစားပေါ့ တကယ်တော့ Programming Language ဆိုတာ တစ်ခုတတ်ရင် နောက်တစ်ခုတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုတတ်ပြီး နောက်တစ်ခုပြောင်းရခက်တယ်လို့ပြောတဲ့လူက ပထမတစ်ခုကိုပဲ ကောင်းကောင်းမတတ်လို့ပြောကြတာ။ အဲတော့ ဘာနဲ့စရမလဲဆို စချင်တာနဲ့စနိုင်ပါတယ် သို့ပေမယ့် အဲဒီ့တစ်ခုတော့ အကောင်းဆုံးတတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တစ်ခုကောင်းကောင်း တတ်သွားရင်တော့ နောက်ထပ်လေ့လာရတာ အဆင်ပြေပါပြီ တကယ်တော့ Programmer အတွက် Programming Language ဆိုတာသိပ်အရေးမပါပါဘူး။ PhyoMyanmar August 2011 Registered Users ကြိုက်တယ်ဗျာ ... ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတိပြီ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ဒါဆိုရင် . C++ နဲ့ပဲ စလိုက်တော့မယ် .. ဟီးဟီးKMD မှာ Java တက်ဖူးတယ် .. အဆင်မပြေပါဝူး .. :)ဒါနဲ့ .. အဲဒီ .. Oo ကို ခုထိသေချာ သဘောမပေါက်ဝူးဖြစ်နေတယ် ။။Oo .. ဆိုတာ Object-အိုရီရန်တက်.. (စာလုံးပေါင်းမေ့သွားလို့) လား ..အဲကောင်ကြီးက .. ဘာကြီးတုန်း ... :-D CalmHill August 2011 Administrators You can read the following discussion. It is not possible to explain withafew words or definitions.http://www.mysteryzillion.org/discussion/4069/object-oriented-software-engineering
PhyoMyanmar said:ကြိုက်တယ်ဗျာ ... ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတိပြီ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ဒါဆိုရင် . C++ နဲ့ပဲ စလိုက်တော့မယ် .. ဟီးဟီးKMD မှာ Java တက်ဖူးတယ် .. အဆင်မပြေပါဝူး .. :)ဒါနဲ့ .. အဲဒီ .. Oo ကို ခုထိသေချာ သဘောမပေါက်ဝူးဖြစ်နေတယ် ။။Oo .. ဆိုတာ Object-အိုရီရန်တက်.. (စာလုံးပေါင်းမေ့သွားလို့) လား ..အဲကောင်ကြီးက .. ဘာကြီးတုန်း ... :-D PhyoMyanmar August 2011 Registered Users ကို CalmHill ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် .. :-)) ခုမှ .. နည်းနည်း တိတွားတော့တယ် .. ဟဲဟဲ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla